Ngokwazi okunokwethenjelwa ezimbili-mass ligcina uthi lokuphotha luzungeza?
Ligcina uthi lokuphotha luzungeza ngaphandle ihaba kube idivayisi enemisebenzi kakhulu. It hhayi kuphela ivala isikhala Ukujikeleza engalingani we crankshaft, futhi adlulisele torque engu kusukela injini gearbox, kodwa osebenzisa crankshaft phakathi ekuqaleni kuze. Kushelele torque engu yezwakala kwenzeka ngenxa yezikhathi isitoreji esifushane kanye ukufinyela okwalandela energy kinetic. Ukuthengisela amandla kwenzeka ngesikhathi namandla unhlangothi we piston, futhi ukusetshenziswa - kwezinye imigoqo. Kulokhu, amasilinda amakhulu (nesikhathi ngaleyo ndlela Imininingwane ngaphezulu unhlangothi), iyunifomu ngaphezulu torque yenjini, futhi kungakho uyaca ligcina uthi lokuphotha luzungeza singaba sincane.
flywheels kukhona izinhlobo eziningana design yabo. Okuvame kakhulu - okuqhubekayo - kuyinto okukhulu cast iron disk kokuba ububanzi 30-40 mm kanti kuthiwa sicindezelwe ohlangothini elingaphandle steel toothing, esebenzisa ukuhlinzeka ukujikeleza ukuziqalela crankshaft ngesikhathi uqalisa. Libuye ligcina uthi lokuphotha luzungeza ezimbili-mass futhi engasindi. Ukusetshenziswa ligcina uthi lokuphotha luzungeza ezimbili mass, ehlanganisa akwazi ukugcina ezimbili, ngeke balahle ukufakwa kule enophephela disc bamba kudivayisi Damping. ligcina uthi lokuphotha luzungeza Esilula elisetshenziswa kakhulu injini Tuning. Ukunciphisa mzuzu inertia kungenxa displacement we mass main of the disc ligcina uthi lokuphotha luzungeza is closer kuze emaphethelweni, ngaleyo ndlela kuncishiswe isisindo sayo (1.5 kg) izici ashukumisayo ngcono, futhi amandla (kufika ku-5%) kwandisa.
Kanjani ligcina uthi lokuphotha luzungeza ezimbili-mass?
Lokhu ligcina uthi lokuphotha luzungeza akusilo elilodwa, kodwa ezimbili izakhiwo. Eyokuqala wabo ixhunyiwe ngqo crankshaft futhi ukuziqalela futhi umqhele. Umzimba yesibili ngesisekelo lokukhuphula inhlangano bamba. Kokubili izindlu kuthiwa kuhlobene esebenzisa ngokuhambisa amabombo (osabalalayo futhi ngemva kwayo), ukuba eliphakathi nendawo Damping uhlelo. Idivayisi elihlangana awavumele ukuhambisa isihlobo nomunye isiqondiso Axial. Kusukela ngaphakathi ligcina uthi lokuphotha luzungeza ezimbili mass ugcwele nge amafutha, esihlinzeka isebenza ngendlela efanele nelungile iphakethe entwasahlobo. Amaphakheji, esikhundleni salokho, ihlukaniswe plastic ezinkanjini ekhethekile nqanda them nga uvala.
Powered ligcina uthi lokuphotha luzungeza ezimbili mass ngoba nsuku stepwise. Soft esigabeni sokuqala entwasahlobo unesibopho ukuqala futhi ephumula injini. iziphethu stiffer ka esigabeni sesibili ukuhlinzeka Damping ka kunyakaza torsional ngesikhathi ukushayela evamile.
Lo mklamo senziwa ukuba ithembeke vibration Damping, umsindo ukunciphisa, ukuncishiswa bafake synchronizers, ukuvikela motor kusuka ngokweqile ukudluliswa, gearshift induduzo. Ngesikhathi esifanayo kukhona luyanda bafake uhlelo entwasahlobo-damper, ngokuvamile ophela zokugwema ukuphuka arc entwasahlobo - iseli main ligcina uthi lokuphotha luzungeza ezimbili mass.
Uma udinga ukushintsha ligcina uthi lokuphotha luzungeza ezimbili mass?
Kungalingani ngemazinga umsebenzi motor, vibration futhi umsindo ngesikhathi engenzi lutho okungase kubangele ukungasebenzi kahle okungavamile ohlelweni ukuthungela, plunger, valve mpintsha, kanye namanye amadivayisi namayunithi, kuhlanganise kuwubufakazi bokuthi DMF engaphelele. Izimpawu, okuyinto zibonisa ngokucacile ukuthi sekuyisikhathi sokuba ufake linye ke nalokhu okulandelayo:
kumiswa imifantu phezu;
igrisi ukulahlekelwa e izindlu bamba;
ngeke uphendukisa yimuphi omunye, noma ngenye indlela.
Ukulungisa of ligcina uthi lokuphotha luzungeza ezimbili mass ezimweni esikhashana cishe akunakwenzeka, kodwa ngoba ngokuvamile ibizwa washintsha ngokuphelele. Nakuba, kwezinye izimo, ukwahlukanisa yokutakula kanye ligcina uthi lokuphotha luzungeza kungaba ushibhile kuka ukuthenga ezintsha (intengo ubuncane okuyinto cishe u- $ 500). Enye kungaba amasha esiku zonke-metal - efanayo ezimbili-mass.
Ngokusho kochwepheshe, okwesikhathi eside futhi ukusebenza onokwethenjelwa ligcina uthi lokuphotha luzungeza ezimbili mass imithetho zokucathula msebenzi kumelwe kugujwe, okungukuthi i-diesel izinjini yakhelwe ukusebenza nge torques okusezingeni eliphezulu ukuvimbela ukusebenza isikhathi eside ngesivinini ongaphakeme kanye isinyathelo bamba ngaphambi yicime .
Isobho lezimbabazane: iresiphi